Igumbi lakho lokulala e igumbi nesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguGustavo Elmer
Phumla njengesibini, wedwa, okanye njengosapho kweli gumbi linoxolo: isakhiwo saso somthi yisampulu yezindlu zemveli zasePuno, ngoku ezihlaziyiweyo ngomoya omtsha kunye nowangoku. Ifakwe ngokupheleleyo, kwindawo esembindini nakwindawo entle, imizuzu emi-5 ukusuka eLake Titicaca ngemoto. Le iya kuba yindawo yakho yokuhlala egqibeleleyo ukuze ukonwabele iPuno, isixeko esihle sasePeruvia, kunye nemimangaliso yayo.
Indlu ijongene nethiyetha kaMasipala, indawo engenakoyiswa kuba isembindini kwaye inoxolo. Iibhloko ezintandathu kude yiPlaza de Armas entle, iCathedral, kunye neebhanki eziphambili. Ibhloko enye kude yiPino Park, kwaye iibhloko ezimbini kude siSitalato iLima, eyona nto ibalulekileyo yorhwebo kunye negastronomic artery esixekweni.
Ukuya kwiibhloko ze-2 i-Central Market ibekwe, iziko eliphambili lokutya kwePuno, apho isivakashi sinokuthenga iimveliso ezingcono kakhulu zendawo: iziqhamo, i-cheeses, ibhotela, ikhofi enikezelwa ngamazwe ngamazwe, inyama kuqala, njl.
Umbuki zindwendwe ngu- Gustavo Elmer
Me gusta viajar y conocer diferentes culturas, gente y experiencias... ¡¡nos vemos en el camino!!
Undwendwe luya kwamkelwa ngumntu ophethe ifulethi, emva kokulungelelaniswa kwexesha lokufika, eliguquguqukayo. Ngelo xesha, umntu ophethe indlu uya kunika undwendwe izitshixo ezi-2: isitshixo sendlu kunye nendlu.